Besondela kuwo umzi ka-Aachen, Monschau likwazi konke: imibono amahle, okukhona siya, umlambo, kunye a inqaba idle, nokuthandana. Yintoni eyenza kube ogqibeleleyo Romantic Cities Ukuze Visit In iJamani kuyo kubathandi ayikho ingxokolo yayo bentaba kwiinduli. Ngaphezu, ukuba u kutyelela ebusika, uya kunandipha yayo market Christmas yesintu.
Meissen uhleli phezu iElbe kumlambo, kwaye kwidolophu endala zonke Saxony kunye A City Romantic. IElbe Isigodi nto amboleke Meissen libangel yothando efana. kunjalo, kukho nezinye ukuze ubone, ezifana kophahla zayo ezintle obomvu ukuba kusikhumbuza Prague. Ngaphezu, Abathandi bokwakha bayakonwabela Ukuphonononga i-cathedral ebalaseleyo nenqaba yekhulu le-16.
Heidelberg na indawo ugqibelele ukuba ufuna ukuziva umoya Romanticism kwaye bonwabele -ngenxa kule dolophu. Kuthini okuthe vetshe, ungahlola amanxuwa enqaba endulini kwaye uthathe uhambo lokuhambahamba ngakumlambo iNeckar kunye nesithandwa sakho.
Ukuba bayahamba yokulwa umlambo e Germany, qiniseka ukuba ibandakanye Cochem njengomnye zokumisa zakho. izidiliya and a breathtaking 11th-century castle are the main features of this river town and a very romantic city.